အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “နယူး Apple ကမူပိုင်ခွင့် selfie စျေးကွက်၏စုစုပေါင်းကြီးစိုးသောအရပ်ကိုရှာ” New York မှာ Nicky Woolf ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 13 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2015 23.29 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Apple က Self-ယူဓာတ်ပုံရိုက်တီထွင်ကြပါပြီဆိုမနိုင် - ဂုဏ်အသရေမှပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ရောဘတ်ကျောနလေိအမည်ရှိအပျော်တမ်းဓာတုဗေဒပညာရှင် - ဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်ဆက်ကခေတ်စားလာပြီဆိုနိုင်. ယခုမှာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီပင်တစ် iStick အပေါ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ... အ selfie တော်လှန်ရေးပြန်ခိုးယူစေခြင်းငှါ.
Apple ရဲ့ selfie အင်ပါယာအတွင်းတစ်ရှေးရိုးစွဲကြီးလို့စွန့်စားမှုအားကစားခဲ့သည်, တစ်ဦးအလင်းလေပြေကျဆင်းသွားသို့မဟုတ်ထိတွေ့သောအခါအ crack ဖို့ iPhone ရဲ့ propensity ဖို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှုကြောင့်.
ဒီအရာသို့ကွာဟချက်ခဲ့ GoPro ပေါဖြစ်ပါတယ်. အပါအဝင် - သူတို့ကကင်မရာကိုပစ္စည်းကိရိယာများပါစေ, ဟုတ်ကဲ့, တစ်ဦးက iPhone-friendly selfie တုတ် - snowboarding စဉ်သင်ကိုယ်တိုင်၏ဓာတ်ပုံများကိုယူသို့မဟုတ်သင့်ထုပ်ထဲမှာကင်မရာတွေ mount ပေးပါတယ်, စွန်လွှတ်ခြင်း, dirtbiking, wingsuiting သို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်. ဥပမာအားဖြင့်, အီတလီခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု, ဘယ်မှာ ဝိန်း Fromm က "အမြန် tripod" ကိုတီထွင်, ခေတ်သစ်သမိုင်း၌အများဆုံးနှောင့်အယှက်အားလပ်ရက်ပစ္စည်းတွေထဲကတစ်ခု.
သို့သော်အင်္ဂါနေ့တွင်, Apple ကမူပိုင်ခွင့်များဆက်တိုက် အွန်လိုင်းပေါ်ထွက် - သူတို့နှင့်တဦးကို iPhone အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးတပ်ဆင်ထားသည့်ကင်မရာကနေဝေးလံခေါင်သီဓါတ်ပုံတွေကိုယူခွင့်ပြုမယ်လို့, ယံတယံမှထိန်းချုပ်ထားသော. အဆိုပါမူပိုင်ခွင့်အထူး GoPro ထုတ်ကုန်အတွက်အားနည်းချက်များကိုဖော်ပြထား.
GoPro ၏စတော့အိတ်, ဇွန်လအတွက်အများပြည်သူသွားလေ၏သော 2014, ကျဆင်းသွား 12% သတင်းကိုဖဲ့ပြီးနောက်.
အဆိုပါမူပိုင်ခွင့်ထိုကဲ့သို့သော iPhone ကဲ့သို့ကင်မရာ device ကိုတပ်ဆင်ထားနိုင်ပုံကိုဖော်ပြထားတယ်, ထိုကဲ့သို့သောစက်ဘီးဦးထုပ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦး surfboard အပေါ်အဖြစ်, ပြီးတော့တစ်စက္ကန့် device မှအဝေးမှထိန်းချုပ်, ယံတယံတူ.
"ဥပမာ, အ GoPro HD ကို Hero2 ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများ, တစ်ဝက်မွန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၏ GoPro Inc မှရောင်းချ, ကယ်လီဖိုးနီးယား, တစ်ဦး "အဆောက်အဦးအပြင်ထုတ်ဝေ" အထုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ရောင်းချကြပါတယ်, Apple ရဲ့အသစ်မူပိုင်ခွင့်ပြည်နယ်များ. "သို့သော်, ထို HD ကို Hero2 ကင်မရာကသာတစ်ခုတည်းပုံရိပ်ဖမ်းယူမှုစနစ်တို့ပါဝင်သည်, သောကကင်မရာ၏ 'ရှေ့' 'ကနေအပြင်ကိုညွှန်ကြားသည့် optical င်ရိုးကို အသုံးပြု. ပုံရိပ်တွေဖမ်းယူ။ "
Apple ကအခြား selfie-related devices များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခဲ့ကြသည်သောအရာကိုအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ဘဲ, နှင့် GoPro ၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှတ်ချက်ပေးရန်ကိုမရရှိနိုင်ခဲ့.